Kulan Ay Yeesheen Guddiga Joogtada Ee Golaha Shacabka Oo Looga Hadlay Furitaanka Golaha – Kalfadhi
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa maanta shir guddoomiyay kulanka guddiga joogtada ee golaha shacabka oo ka dhacay xarunta Golaha Shacabka.
Kulanka ayaa loogu hadlay furitaanka kalfadhiga 4-aad iyo sida loo kala hormarinayo shaqooyinka horyaalla golaha.
Waxaa lagu soo bandhigay shuruucda hada hortaalla guddiyada Golaha Shacabka, kuwa aqrinta koowaad iyo labaad maray iyo kuwa hada heerka diyaarinta maraya.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa kulanka ka sheegay muhiimadda ay leedahay dardar gelinta howlaha muhiimka ee Golaha Shacabka laga doonayo inuu qabto kalfadhiga 4-aad.
Guddoomiye Cawad oo kulanka ka hadlaya
Xildhibaan Maxamed C/llaahi Xasan (Nuux) oo ka mid ah Habdhowrka Golaha Shacabka ayaa sheegay in kulanka lagu soo bandhigay jadwalka shaqada kalfadhiga 4-aad iyo sida loo kala hormarin karo shaqooyinka.
“ kalfadhiga 4-aad ee furmaya shaqooyin muhiim ah aya horyaalla golaha shacabka, waxa la faray dhammaan gudiyada iney si wanaagsan u shaqeeyaan, guddoonka waxa uu diyaariyay xafiisyadii lagu shaqeyn lahaa, sidaasi darteed wa in guddi walbo uu si adag u shaqeeyaa si guul loogu gaaro shaqooyinka adag ee na horyaalla”. ayuu yiri Xildhibaan Nuux.
Xildhibaan Nuux oo warbaahinta la hadlaya
10-bisha Simbteembar ayaa la filayaa in Golaha Shacabku uu kasoo laabto kula fasax dheer oo ay galeen 28-kii bishii Meey.
Halkan ka akhriso warbixin aan ka diyaairnay fasaxii baarlamaanka 10-aad.